(NEPALI) The pendulum of power. | ILLUMINATI AVENUE
(NEPALI) The pendulum of power.
(NEPALI) The pendulum of power. Mar 24, 2020 8:09:12 GMT
Post by Darling Dolly on Mar 24, 2020 8:09:12 GMT
क्ति को पेन्डुलम
विश्वव्यापी परिवर्तनको समय हामीमा छ। यद्यपि धेरै यी परिवर्तनहरूमा विश्वस्त छन्, धेरै अन्य अब भविष्यको बारेमा अनिश्चित छन्। सबै सजीलो हुन्छ जब हावा अझै र भूमि शान्त छ। तर जब परिवर्तनको कुरोले आफ्नो पछाडि धकेल्न थाल्छ, मानवहरूले तिनीहरू वास्तवमै कति नाजुक हुन्छन् भनेर महसुस गर्न थाल्छ। यस युगको युगमा मानवता सदाको लागि खडा छ: बिर्सन नसक्ने चिहानमा डुब्दै, जहाँ कुनै मिसटेपले विलुप्त पारेको हुन सक्छ। किनारमा धकेल्नु अघि मानवताले कति उथलपुथल गर्न सक्छ? के यी ग्लोबल पुन: व्यवस्थाहरू मात्र मानवताका खुट्टाको तल काम्दै छन् वा ती अन्तिम भूकम्पका गम्भीर समस्याहरू हुन्?
एकता को सामूहिकता मा भेटिन्छ।
मुकुट हजारौं राजा र रानीहरूको माध्यमबाट बितेको छ, प्रत्येक विगतको भन्दा फरक। घडीको पेन्डुलम जस्तै, अनन्त समयको साथ शक्ति एक साइडबाट अर्कोतिर घुमाउँदछ। यसले दुई विपक्षी सेनाहरू बीच सन्तुलन सिर्जना गर्दछ - प्रत्येक पक्ष अर्डरलाई कायम राख्न अर्कोमा भर पर्दछ। कुनै पनि पक्ष पूर्ण रूपमा सहि वा गलत छ तर कुनै पनि पक्षले रोमान्ट गर्न सक्दैन। यदि पेंडुलम चलाउन बन्द हुन्छ भने, घडी कार्य गर्न बन्द हुन्छ।
शक्ति शान्त ट्रान्सफर स्वतन्त्रता को एक आधार हो।
मानवताका नेताहरूको काँधमा कठिनाइहरूको लागि दोष राख्न यो सजिलो छ यदि तिनीहरू तपाईंले छनौट गरेका नेताहरू होइनन् भने। तिनीहरूको विरोधको दिमागमा नेता एक शत्रुमा परिणत हुन्छ; उनीहरूका गल्तीहरू प्रीमेडेटेड आक्रमणहरूमा परिणत हुन्छन्; तिनीहरूको मानव त्रुटिहरू अपूरणीय दोषहरू मा परिणत हुन्छन्; तिनीहरूको मिसटिप्स दुष्ट षडयन्त्रहरूमा परिणत हुन्छ। धेरैले उनीहरूको कुरामा असन्तुष्ट हुने कुनै पनि कुरा देख्न इन्कार गर्दछन् किन कि उनीहरूको विश्वास फरक छ।
आलोचना एउटा संयम हो जसले नेतालाई तानाशाह बन्नबाट रोक्दछ। तर सबैभन्दा ठूलो नेता पनि समान सामग्रीबाट बनेको छ सब भन्दा कमको। एक राजा र एक साधारणको दिमागमा फरक छ ती मात्र भरिपूर्ण पार्नका लागि। कुनै पनि नेता पूर्ण रूपमा खराब छ भनेर दावी गर्नु - वा पूर्ण रूपमा राम्रो छ - तिनीहरू मानव होईन भनेर दावी गर्नु हो। अनन्त प्रश्नमा शान्ति खोज्नुहोस्: "कुई बोनो?" कसको फाइदाको लागि? उनीहरूले नेतृत्व गरेका जनताको विनाशबाट नेताहरूले के पाउन सक्छन्? कुनै राजा वा रानीले किन उनीहरूको मुकुट लगाएको कारण नष्ट गर्न प्रेरित गर्दछ?
सबै राजा उसको मान्छे बाट टाढा छन्। कसले साँचो देशको नेतृत्व गर्छ?
जब तपाईका नेताहरूको कार्यमाथि प्रश्नहरू उठाउँदै हुनुहुन्छ, आफैलाई सोध्नुहोस् कि उही जिम्मेवारी वहन गर्ने हो भने उही दुविधाको सामना कसरी गर्ने। याद गर्नुहोस् कि सार्वजनिक रूपमा हेरेको कुरा केवल पर्दाको पछाडि के हुन्छ भन्ने अंश मात्र हो - धन र शक्तिको एक भाग जसले यसको पछाडि भइरहेको निर्णयहरूको गम्भीरतालाई लुकाउँछ। तपाईका नेताहरूलाई तपाईलाई चोट पुर्‍याउने कुनै प्रेरणा छैन, र तपाईको सुरक्षाको हितमा, प्रायः यस्तो निर्णय लिनुपर्दछ जुन तपाईले बुझ्नुहुन्न र प्रस of्ग बाहिर हेरेमा शंकास्पद लाग्न सक्छ। यदि तपाईलाई लाग्छ कि तपाईका निर्णयहरुले तपाईको वर्तमान नेताहरुका निर्णयहरु भन्दा मानवताको प्रगतिमा राम्रो सेवा पुर्‍याउँछ, तपाईलाई पुर्‍याउनको लागि आवश्यक समय र प्रयास लगानी गर्न स्वागत छ, जस्तो कि उनीहरूले नेताहरुलाई गरेका थिए। समय एक शक्तिशाली प्रकाशक हो। यस ग्रहले सहस्राब्दी कठिनाइहरू पार गरेको छ र इतिहासले रेकर्ड गरेको युद्धहरू भन्दा बढी विनाशकारी प्रकोपहरूबाट जोगिएको छ। मानवताले यसको सबैभन्दा खराब नेताहरू, यसको सबैभन्दा खराब शासनहरू, यसको सबैभन्दा खराब अवरोधहरूको सामना गरेको छ, र बलियो हुनको लागि बाँचेको छ।
मत द्वारा विभाजित, मानवताको राम्रो लागि सबै एकजुट हुनु पर्छ।
यस ग्रहको सबैभन्दा लचिलो प्रजातिको भविष्यको लागि नडराऊ। यद्यपि दरबार भित्रका चित्रहरू परिवर्तन हुन सक्दछन्, र नक्सामा नामहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ, मानवताको घडी अविरल जारी रहनेछ। जब परिवर्तनको हावाले तपाईंको खुट्टालाई धक्का दिने धम्की दिन्छ, पिरामिडको आश्रयमा शरण लिनुहोस्। हामी सँधै तपाईंको लागि बाहिर हेर्दै छौं। ▲